တေးညမ်းဂိမ်း:-အခြေခံ Xxx လိင်ဂိမ်း
နှုတ်ဆက်ဖို့အသစ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းစီမံကိန်းအပေါ်ပိတ်ဆို့! ကျနော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်တေးညမ်းဂိမ်းခုႏွစ္ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆ နှင့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတင်ဖို့အဆင်သင့်အပေါ်အတွက်အင်တာနက်ကိုလူတိုင်းပျော်မွေ့! ကိုယ္စားလူတိုင်းမှာအဆိုပါအဖွဲ့သည်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများအားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်မွေ့လျော်သင့်ရဲ့အချိန်မှာတေးညမ်းဂိမ်း။ ဤသည်အလုပ်သမားများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်တကယ့်အမှုထမ်းကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်ယုံကြည်သောဤအဖြစ်စေခြင်းငှါ၊အဆုံးစွန်လိင်ဂိမ်းအတွက်ရရှိနိုင်အခုအချိန်မှာ။, အဲဒါကြောင့်အကြီးအအကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်တင်ပို့–အပေါင်းသင်ထွက်ကြိုးစားဖို့တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့! ယုံပြီးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီစီမံကိန္းသွားသင်တို့ထိရန်အတွက်နည်းလမ်းများစဉ်းစားဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်:မသာလိင် simulation ဖစ္ၿအံ့သြဖွယ်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့တွေကအလွန်ကြီးစွာသောအတိပေး! အဖြစ်ဂုဏ်ယူ၏ပိုင်ရှင်များဒီခေါင်းစဉ်၊မယုံရထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကစားသမားများနှင့်ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အရာတစုံတခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအကြောင်းပြောတေးညမ်းဂိမ်းဆော့ကစားပြီးနောက်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အဘို့အနာရီ။ ႀကိဳးသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်မိတ်ဆွေ:အမှုအရာအကြောင်းကိုရတော်တော်ရူးဒီနေရာမှာသင်တို့အဘို့အ!
ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်အရေးကြီးကြောင်းလူတိုင်းအစွမ်းရည်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ပျော်မွေ့။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်းအညီညွှတ်ရေးအင်ဂျင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုစကေး၏အရေအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်–ကောင်းစွာအဖြစ်အရည်အသွေးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ–သင်စဉ်ကစားခြင်းအားဖြင့်တေးညမ်းဂိမ်း။ သင်တို့အသူတွေအတွက်အပေါ်ပိုင်း-ခေတ်မီ၊သင်ရလိမ့်မယ်၊အပြည့်အဝအတွေ့အကြုံ၊သော်လည်းမိတ်ဆွေတို့အပေါ်သက်ကြီးစက်အဖြစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ(ဟုတ်ကဲ့၊သင်ကသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသင်ချင်တယ်ဆိုရင်!)အရအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဗားရှင်းသေချာစေရန်အကြောင်းဒါကြောင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးရ။, ကျနော်တို့ကယ့်ကိုမာနထောင်လွှားခြင်း၏ရလဒ်ကိုဒီနည်းပညာ၏အဖြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစမ်းသပ်သာပတ်ပတ်လည် ၂၀%အားကစားသမားအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုမည်သည့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဂရပ်ဖစ်မှာအားလုံး။ ဆဲ၊ငါတို့ရှိသချင်သောသေချာစေရန်သူတို့တတ်နိုင်င့်ရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ပျော်မွေ့တေးညမ်းဂိမ်းအတူလူများအပေါင်းတို့အပေါ်မှာထိုင်နောက်ဆုံး Ryzen္နှင့် ၃၀၀၀ စီးရီးဂရပ်ဖစ်ကဒ်! ပါကသပ္ပါယ်အဂၤါအမှန်တကယ်ပိတ်ထား၌လုံးဝမဟုတ္အဖြစ်သတိပေးကြောင်းသင်၏ဘောင်နှုန်းတြဆင်းရဲခံရရလဒ်အဖြစ်သင်စရာမလိုပါလျှင်အထောက်အထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မင္ကိုယ္ေ!
သင်ကျင့်သောအရာရာဒီအပေါ်တေးညမ်းဂိမ်းဟာလုံးဝကိုအပေါ်သိမ်းထား။ သင်ပါလိမ့်မယ်ကစားမှတဆင့်သင့်၊သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအားလုံးဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့အသင့်ဒေသခံကွန်ပျူတာ။ ဒီလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုအစဉ်အမြဲအင်တာနက်အပေါ်ဆက်သွယ်၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအဘို့အင့်၊ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်မိတ်ဆွေမရှိသလောက်ချင်သိမ်းထားဖို့ဘာမှမဆက်စပ်သောအရွယ်ရောက်ဖျြော–အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ–ပေါ်လိုနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ။ ဒါကြောင့်လည်းဆိုလိုကြောင်းသင်လျော့နည်းဖွယ်ရှိင့်ဆုံးရှုံးဖို့တိုးတက်မှုကြောင့်သင်ကယ်ဖို့မေ့လျော့နှင့်၊မမေ့ဖိုင်၏တည်နေရာနှင့်တော့။, ငါတို့တိမ်အင်္ဂါရပ်များမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်သင်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှုမရှိဘဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ပါ။ ပါကသင်သည်လည်းထုံးစံအကယ်မှတ်တစ်လျှောက်လုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံကသင်ချင်ရပါလိမ့်မယ်အသုံးချဖို့အချိန်ဖို့အချိန်ကနေကြောင်း–ဖွင့်သောကြောင့်၊သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကယ့်ကိုအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမည်သို့ဖြစ်ပျက်အတွက်တေးညမ်းဂိမ်း!
အခါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်အတွက်အသံကား၊အမှန်တကယ်အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကောင်းစွာ၊သင့်ရရှိနိုင် NPCs နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့၊စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တည်နေရာပြီးတော့အားလုံးချည်ဖို့သင်၏တိုးတက်မှုနှင့်ရွေးချယ်မှု။ အချိန်၊သင်ပြောလိမ့်မယ်နှင့်လုပ်သောအရာဖြစ်စေလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ဇာတ်ကောင်ကနေသင့်ရဲ့ဂိမ်းသို့မဟုတ်အသစ်ထည့်သူများအတွက်။ အသီးအသီးရွေးချယ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဓိကလုပ်ရပ်နှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းစဉ်းစားဖို့အစဉ်ပညာရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့တေးညမ်းဂိမ်းရနိုင်ဖို့အတွက်အပြည့်အဝအတွေ့အကြုံ။, သင်သည်လည်းသင်ဖို့ရွေးချယ်ကယ်တင်ချက်များမှာအရေးပါအချိန်လေးပြီးတော့ပြန်လာများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတွေကနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာ။ ကျနော်တို့သေချာသေးပါအတိအကျဘယ်လောက်များအပြားတစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ခု၊ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး ၃၀! အချို့သောကွဲပြားခြားနားအနည်းငယ်သော်လည်းအခြားသူများလုံးဝအရူး။ ဒါဟာသင်မှတက်ထွက်အလုပ်လုပ်သောသူမြားပေးသောနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုမသွားချင်။ မှကျေးဇူးတင်စကားကြယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးအဖွဲ့က၊ဒါဟာအမှန်တကယ်အဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အားလုံး၏တူညီသောအ NPCs အတွက်တေးညမ်းဂိမ်းနှင့်သူတို့ကိုစကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုကျော်တို ၁၃၅ တက်ကြွစွာစာသင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်နှင့်အတူအားလုံးနီးပါးကသူတို့ကို၏အားထားဂရု။, မည်သို့ချိုမြိန်သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအဘို့အရွေးချယ်မှု၏ကြော dudes ချင်သောအပတ်ပတ်လည်ရဖို့ကြိုးစားထဲကအသစ်အတွေ့အကြုံ!
သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဆိုပါဖန်တီးရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်ကြိုက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူတစ်ဦးကြီးမားသောအရေအတွက်ရွေးချယ်မှုများ၏အတွက်သင်ကြည့်ရှုသည်။ တေးညမ်းရှိပါတယ်အတော်လေးထူးခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ကြိုက်ကိရိယာကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟူသောသင့်ရရှိနိုင်ဆြးေႏြးေရွေးချယ်စရာများ၊ရွေးချယ်မှုအတွက်ဒပ်နှင့်တော့။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးရှိခြင်းရဲ-အာရုံကိုပင်သင်အားငါပေးမည်မှစွမ်းရည်ကိုပိုမိုယူအန္တရာယ်–အများအတွက်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးသည်! ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးအားကြီးသောလူထုကိုဆန့်ကျင်သောအဖွဲ့များထည့်သွင်းကိရိယာနိုင်အောင်ပြင်အားလုံးအ NPCs သင်ဖြတ်ပြီးလာ။, ငရဲ၊သင်ပင်သုံးစွဲသည့်သွင်းကုန်အင်္ဂါသို့သူတို့ကိုငါဖွင့် pornstars သို့မဟုတ်အခြားအေးမြဇာတ်ကောင်ခဲ့ကြကြောင်းမျှဝေအပေါ်အဆိုပါအရာရှိကဖိုရမ်များ! တေးညမ်းဂိမ်းလည်းတက်ကြွစွာဖက်ဆာဗာမှသင်ထွက်စစ်ဆေးချင်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလျှင်ပြောနေတာဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့်အတူအခြားသွေးကြောဂိမ်းကစား။ ကျွန်မတို့ဟာသွားသောအပိုခြေလှမ်းသေချာစေရန်သငျသညျသက်သာခံစားရပြီးပျော်ရွှင်နေချိန်မှာဒီမှာ–ကိုယ့်ကြောင့်မခံမယူကြဘူးခွင့်ပြုဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်အချို့ကြောင်းတူသံကွဲများ၊လိင်အရေးယူကစားသောအခါတေးညမ်းဂိမ်း။
ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်အခုအချိန်မှာထွက်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးအသစ်ညမ်းဂိမ်း။ သင်မှားယွင်းနေမသွားနိုင်!